UKUFA KUKAYESU: NGABA UYAYAZI UKUBA YENZEKE NJANI?
Kule nqaku siza kukuxelela ukuba kwenzeka njani ukufa zikaYesu kwinyani; ngaphaya kweemovie esiqhele ukuzibona. Ayinamsebenzi ukuba uyakholwa okanye akunjalo, le datha iya kuhlala inomdla.
1 Ukufa kukaYesu, kwenzeka njani?
1.1 Kukuthini ukubethelelwa emnqamlezweni?
1.1.1 Kukuthini ukubethelelwa emnqamlezweni?
1.2 Iinkcukacha zokufa kukaYesu
1.3 Umqondiso wokufa kukaYesu
Ukufa kukaYesu, kwenzeka njani?
Njengoko abaninzi besazi, uYesu wasweleka eneminyaka engama-33 ubudala, ngolwesiHlanu, umhla we-7 ku-Epreli, kunyaka wama-30, wexesha lethu eliqhelekileyo; okanye ngaphezulu kuyaziwa, unyaka wama-30 AD Singafumana idatha kunye neenkcukacha malunga nokusweleka kwakhe, kwiincwadi zevangeli ezibhalwe kwibhayibhile ngabapostile bakhe.
Nangona kunokwenzeka ukuba ufumane amanye amaxwebhu, ngaphandle kwebhayibhile enganxibelelanisi nje kuphela Ukufa kukaYesu; kodwa nobomi nomsebenzi wakhe. Nokuba kunjalo, yonke imithombo yamaxwebhu iyavumelana ngento ethile; UYesu Kristu waseNazarete, wasweleka ebethelelwe emnqamlezweni, njengoko bezisiwe kuthi kwiifilimu ezisekwe kwiPassion yakhe.
Kukuthini ukubethelelwa emnqamlezweni?
Yayisisigwebo sentambo amaRoma ayesisebenzisa ukohlwaya izaphuli-mthetho, amakhoboka nabanye abonakalisa izinto; Nangona kubonakala kungaqhelekanga, esi sohlwayo sasisebenza kubantu bamanye amazwe, kodwa hayi kubemi base Roma ngokwabo; bohlwaywa ngenye indlela.
Le ndlela, ngokuchasene noko abaninzi bakukholelwayo, yayingaxhomekekanga kumaRoma kuphela; eneneni, ayingabo abadali besi sigwebo sentambo. Kukho idatha yokuba i-Achaemenid empire, kwi-XNUMXth century BC, sele isetyenzisile olu hlobo lwendlela ukohlwaya abantu.
Ukubethelelwa emnqamlezweni mhlawumbi kwavela eAsiriya, ingingqi yakudala, eyayiphantsi kweMesopotamiya; Kwiminyaka kamva, uAlexander oMkhulu, wakopa kwa le ndlela inye wayisasaza kuyo yonke imimandla ye-Mpuma yeMeditera, ngenkulungwane ye-XNUMX BC.
Ewe kunjalo, le ndlela yafikelela kumaRoma, awathi nayo kamva ayithatha, ukwenza ukubulawa kwawo. Kuyaziwa ukuba malunga ne-73-71 BC; sele buBukhosi baseRoma, basebenzise ukubethelelwa emnqamlezweni njengendlela eqhelekileyo yokwenza.
Zininzi izinto ezahlukileyo kwesi sigwebo sentambo, nangona sesona saziwayo kuthi sonke; oyena mntu ubethelelwe iinyawo nezandla zombini, emnqamlezweni ngomthi. Lo mntu wayesetyenziselwa le ndlela, washiyeka apho iintsuku, de wasweleka, enxibe ngokungagqitywanga okanye eze; Nangona kwakubakho iimeko apho umntu wayenokufa kungaphelanga neeyure ezimbalwa ebethelelwe.
Nangona isenokubonakala ngathi yindlela yakudala nengavumelekanga, isasetyenziswa kwixesha langoku; emva kwexesha elide kangangokuba yadalwa kwaye yade yafana ukuba inyamalale uBukhosi baseRoma, wayeka ukuyisebenzisa. Amazwe afana ne: Sudan, Yemen ne Saudi Arabia; bayaqhubeka nokusebenzisa le ndlela njengesohlwayo, kwezinye iimeko, nanjengesigwebo sentambo.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: UYesu Oyinyani UThixo Nendoda Yokwenene.
Iinkcukacha zokufa kukaYesu
Ngoku, njengoko sonke sisazi, uYesu wagwetywa ngamaJuda ukuba afe emnqamlezweni, endaweni yobomi besaphuli-mthetho, uBharabhas.
Kuyaziwa ukuba ngaphambi koku, wabethwa ngokumasikizi kwaye wanyanzelwa ukuba awuthwale umnqamlezo, kuzo zonke izitrato zase Yerusalem, ukuya phezulu eGolgotha; indawo apho wabethelelwa emnqamlezweni emva koko wasweleka.
Ngokokufumanisa okuthile okwenziwe kwi-necropolis ebekwe eGivat ha-Mivtar; apho amathambo omntu afunyanwa khona, owayephila ngexesha elifanayo noNyana kaThixo. Ngokusekelwe koku kufunyanwa, iinkcukacha ezingaphezulu zinokunikwa malunga neeyure zokugqibela zobomi bukaYesu waseNazarete.
Le ndoda yayisesikhonkwane ezinyaweni zayo; into engenakususwa, ukongeza kwintsalela yeenkuni ezazisenayo; Egqiba ngokugqibezela ukuba, wabethelelwa emnqamlezweni.
Uhlobo lomthi abalisebenzisileyo kule ndoda kwaye, ngokunokwenzeka kuYesu (kuba njengoko besitshilo, yayilelo xesha), yayingumnquma; Kwaqatshelwa kananjalo ukuba yayinoprosesa omncinci ezinyaweni, awayesebenzisa amaRoma ukuxhasa iinyawo zawo. Ngale ndlela, ubomi bomntu ogwetyiweyo bandiswa, kuba, kungenjalo, unokufa ngenxa yokufuthaniseleka ukuba bonke ubunzima bomzimba benziwe kuphela ziingalo.
Esi siqwenga somthi, sanceda indoda ukuba ixhomekeke kuyo kwaye ubunzima bomzimba bahanjiswa; ukunika ixesha elide ekubandezelekeni.
Kwimeko yendoda abayifumeneyo, akuqapheleki ukuba amathambo ezandla okanye izihlahla zakhe zaphukile, kuba beziphelele; ke oosonzululwazi bafumanisa ukuba akabethelelwanga, kodwa babotshelelwa nje ngokuqinileyo emnqamlezweni ziingalo. Kwindaba ye Ukufa kukaYesuKuyaziwa ukuba bekunjalo.
Enye yezona zinto zazizezona zinkulu zale mihla ukuba yayikukubethelelwa kukaYesu ezintendeni zezandla okanye ezihlahleni; ukuthandabuza ukuba sele isonjululwe, kuba kuye kwagqitywa kwelokuba ukuba umntu ubethelelwe (okanye abethelelwe nje) kwizandla zezandla, ngenxa yobunzima bomzimba, kungekudala okanye kamva iyakuphuma, iphele idilika umzimba. Kwelinye icala, xa umntu ebethelelwe emnqamlezweni, le ngxaki ibingasayi kuphinda ivele kwaye iya kugcina umzimba womntu uphantsi apho ubethelelwe khona.
Kwimeko yeenyawo, kwinto enokufunyanwa ekufumaneni; Kwasetyenziswa isikhonkwane esinde ngokwaneleyo kwayinto enye, siwela iinyawo zombini zomntu ngale ndlela ilandelayo: imilenze iya kuvuleka ngendlela yokuba isibonda esiphakathi sibe phakathi kwabo bobabini; emva koko, amaqatha emilenze, ayophumla emacaleni alo myalezo, kwaye isikhonkwane sihambe ngazo zombini iinyawo ukusuka eqatha ukuya emaqatheni; ukuwela unyawo kuqala, iinkuni kunye nolunye unyawo.
Yinto eyaziwayo ukuba uYesu, emva kokuba ebethelelwe emnqamlezweni; wachitha ixesha elide emnqamlezweni, kwaye kuthiwa lijoni laseRoma eligama linguLonginus, phantsi kwemiyalelo yokuphelisa ukungcungcutheka kukaKristu; wamhlaba ngomkhonto ecaleni, owabangela uphalazo-gazi olukhulu kwaye emva koko, weza naye Ukufa kukaYesu.
Umqondiso wokufa kukaYesu
Kuyabonakala ukuba ukubethelelwa emnqamlezweni sisohlwayo esikhohlakeleyo, esibuhlungu kunye nesiva kabuhlungu. Abantu abaninzi abadumileyo kunye nezithandi zobulumko, njengoCicero (nangona yayiyiminyaka emininzi ngaphambi kukaKrestu); ulinganise le ndlela, njenge:
"Esona sohlwayo sibuhlungu sesona sikhohlakali sikhohlakeleyo nesoyikekayo."
"Eyona ntshutshiso imbi kunye neyokugqibela, eyabekwa kumakhoboka."
Ngaphandle kwayo yonke le datha kunye neenkcukacha malunga Ukufa kukaYesu, kufuneka kuqatshelwe; izizathu awayenazo, esazi nokuba ubomi Bakhe buzophela njani. Njengokuba iivangeli ezininzi zisitsho, ngaye sikhululekile kwaye sixolelwe sonke isono nobubi kulo mhlaba; Ngaphandle kokusibonisa uthando olukhulu lukaThixo nolukaYesu Krestu, othi, ade asifele, asithande ngaphaya kwazo zonke izinto esizithethayo, esizenzayo nesizicingayo; nokuba, nangona wayengumoni, wathwala lonke ityala lethu
Ividiyo elandelayo esiza kukushiya yona ngokulandelayo, iqulathe uxwebhu oluchaza ukuba zazinjani iiyure zokugqibela zikaYesu Krestu waseNazarete; ukuze ukwazi ukwandisa ulwazi kule post kwaye ufunde ngakumbi ngayo.